प्रस्तुतीकरण: सामाजिक जाँदै छ - व्यापार संस्करण Martech Zone
प्रस्तुतीकरण: सामाजिक जाँदै छ - व्यापार संस्करण
बुधबार, जुलाई 18, 2012 आइतवार, सेप्टेम्बर 8, 2013 Douglas Karr
हिजो मैले बोले इन्डियानापोलिसमा व्यवसाय कम्युनिकेटरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संघ। दर्शकहरूको गतिशीलता दुबै साना र ठूला कम्पनीहरू, र व्यवसायिक व्यक्तिहरू बीच मिसाइएको थियो जुन सामाजिक सञ्जाललाई नयाँबाट अनुभवी सामाजिक बजारहरूमा फैलिएको छ।
प्रत्येक पटक जब म प्रस्तुतीकरण तयार गर्दछु, म भूतपूर्वमा प्रस्तुतिकरणको इतिहासमा जानेछु ... स्लाइडहरू र जानकारीहरू जुन समयमै मिल्दैन, छोड्दैछ र ढिलाइका शीर्षकहरूका लागि नयाँ स्लाइडहरू थप्दै छु। जबकि हामी सँधै सोशल मिडियामा के भइरहेको छ भन्ने धारमा छौं, कथा नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ। एउटा कुञ्जी तपाईंको व्यवसाय सम्बन्धी सम्भावहरू र ग्राहकहरू अब एक आशा हो।
विज्ञापन वस्तुतः हरेक आगन्तुकको ire बढाउन प्रयोग गरियो। आज, जहिले पनि स्वागत गरिएको छैन, त्यहाँ धेरै थोरै व्यक्तिले कम्पनीको सामाजिक उपस्थितिमा विज्ञापन र पदोन्नतीहरूको बारेमा गुनासो गरिरहेका छन्। वास्तवमा - हामीले प्रदान गरेका केही तथ्या .्कले देखाउँदछ कि छुट र त्यहाँ धेरै व्यक्तिको प्रस्तावहरूको अपेक्षा छ। तिनीहरू वास्तवमा चाहनुहुन्छ कम्पनीहरु बेच्न!
अर्को रणनीति जुन ईश्वरनिन्दा हुने थियो सामग्री भुक्तान गरिएको छ। जबकि धेरै व्यक्ति सामग्री लाई जब भुक्तान गरिन्छ भनेर पनि महसुस गर्दैन ... सशुल्क सामग्रीको विचारले लामो समयको लागि अत्यन्त आलोचना गर्‍यो। म वास्तवमा सबै साथ एक समर्थक भएको छु। तथ्य यो हो कि धेरै लेखकहरूले अधिक राम्रो काम गर्छन् व्यवसायको प्रयासलाई दर्साउँदछ - त्यो भन्दा पनि कम्पनीहरू आफै उनीहरू नै हुन्। सामग्री उत्पादन गाह्रो छ - जबसम्म यो तपाईंको काम हुँदैन। हामीले अनुसंधान र सामग्री लेखकहरूले सम्बन्ध बनाएका छौं एक अद्भुत कार्य गर्दछ।
के परिवर्तन भएको छैन कि यो अझै पनि सानो ब्रान्ड मान्यता र सानो मार्केटिंग बजेटको साथ एक कम्पनीको लागि एक अद्भुत व्यापार निर्माण गर्न एक अद्भुत अवसर प्रदान गर्दछ। (प्रस्तुत कम्पनी समावेश गरियो!) केहि अरू जुन परिवर्तन भएको छैन, तर अधिक गाह्रो भयो, तपाईंको सामग्री र सोशल मिडिया रणनीतिहरूको निर्माण र प्रमोट गर्दैछ। किन? किनभने तपाईंको प्रतिस्पर्धा र ठूलो व्यापार अन्त मा समातिएको छ।
खोज वा सामाजिकको लागि अपेक्षाहरू सेट गर्ने काम आजकल अझ गाह्रो हुँदै गएको छ किनकि टेक्नोलोजी, प्लेटफर्म र प्रतिस्पर्धा सबै चालका साथ छन्। विगतमा अधिकार प्राप्त गर्नु र सामाजिक व्यवसाय निर्माण गर्नु थियो - हिम्मत मँ भन्छु - सजिलो। ती दिनहरू धेरै बितिसकेका छन्, यद्यपि। थप सर्टकटहरू छैनन्। प्रतिस्पर्धा कडा छ र तपाइँ वास्तवमै तपाइँको कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न सबै भन्दा राम्रो स्रोत समर्पित गर्न आवश्यक छ। महत्वपूर्ण बचतको फाइदा अझै पनि एक ठूलो रणनीतिको साथ आउँदछ ... यो प्राप्त गर्न अब अधिक गाह्रो छ।
टैग: pptप्रस्तुतिसामाजिक संजालसामाजिक मिडिया प्रस्तुतिसामाजिक मिडिया रणनीतिहरु
तपाईको बजार रणनीतिमा संस्कृति बिचार गर्न पाँच तरिकाहरू
Hearsay सामग्री विनिमय: क्युरेसन र सिंडिकेशन